Isikhungo Se-Open Science kanye ne-AfricArXiv Launch Branded Preprint Service - AfricArXiv
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-XNUMiyi-Juni 25 I-XNUMiyi-Juni 25
I-Center for Open Science (COS) ne I-AfricArXiv wethule insizakalo entsha yokuphrinta ezothuthukisa ulwazi lwesayensi emazweni ase-Afrika emikhakheni eminingi yesayensi.
Iphinde yashicilelwa ku- cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service/
I-AfricArXiv (i-African Science Archive) iyindawo entsha yokugcina yamahhala evulekile #ScienceinAfrica kososayensi base-Afrika ukuthi babelane ngemiphumela yabo yocwaningo kuyo yonke imikhakha yesayensi, kufaka phakathi kepha kungagcini kwezolimo, i-biology, i-physics, i-chemistry, imfundo, isayensi yezempilo, isayensi yezenhlalo, isayensi yezemvelo kanye nobunjiniyela.
Lo mbono waphakanyiswa ngesikhathi seNgqungquthela yokuqala ye-African Open Science Hardware Summit (I-AfricaOSH) eKumasi, eGhana, lapho iqembu elikhulu lososayensi base-Afrika nabanye bezomhlaba bexoxa ngezinto ze-Open Science Hardware esimweni sase-Afrika. Isidingo sokukhishwa okujwayelekile kwi-Open Science yabase-Afrika saqhamuka, sathunyelwa nge-inthanethi saze saphendulwa nguMqondisi Omkhulu we-COS, uBrian Nosek, ngesiphakamiso sokuba yilungelo lokugcina izwe lase-Afrika njengengxenye yesikhulumi: https://twitter.com/AwareAwuah/status/985171790438813697
I-AfricArXiv izoba uhlelo lokushicilela olungama-hybrid nolwangempela oluhlanganisa izinzuzo zesivinini zeseva eyi-prerint kanye nezinzuzo zekhwalithi zokuhlolisisa. Ngokufanelekile, imibhalo yesandla eshicilelwe ku -AfriArXiv ingaholela ekuthembekeni okukhulu kolwazi lwesayensi e-Afrika futhi isuka e-Afrika ngokunikeza ikhwalithi enkulu nokubonakala obala, ikhulisa ukufinyeleleka kokutholakele, futhi ikhulise ijubane lokwabelana ngolwazi lwesayensi.
"Okuqukethwe yisayensi yase-Afrika kuwebhu kusatholakali," kusho uJustin Ahinon, umsunguli we-AfricArXiv. “Siyaziqhenya ngokwethula i-AfricArXiv, okuyisigaba esisha semikhakha eyahlukene yokushicilela ngokwesayensi, mayelana nokuvala lelo gebe. Sakha inqolobane yedijithali yososayensi base-Afrika ukuthi babelane ngayo yonke imiphumela yabo yocwaningo, kufaka phakathi ama-preprints, ama-postprints, ikhodi nedatha. ”
UJo Havemann wengeze, “I-AfricArxiv izohlanganisa futhi ikhombise ukwehluka kwemiphumela yocwaningo lososayensi base-Afrika futhi iyenze ifinyeleleke kososayensi base-Afrika kanye nabangewona ama-Afrika kanye nabangewona ososayensi emhlabeni jikelele. Kanye namanye amakhosombe wesifunda wokuprinta (I-Arabixiv, I-INA-Rxiv) lokhu kungumnikelo obalulekile wokwehlukanisa iSayensi. ”
I-AfricArXiv insiza yamashumi amabili nanye yomphakathi eyakhiwe kwipulatifomu ye-COS's, I-OSF, esiza abacwaningi ukuklama nokuphatha ukuhanjiswa komsebenzi wabo, ukugcinwa kwemininingwane, ama-DoIs kanye nokubambisana. I-COS ifundise leyo nkundla ukuze isize imiphakathi yocwaningo ezindaweni eziningi ukuthola ucwaningo olusha njengoba kwenzeka futhi ithola impendulo esheshayo ocwaningweni lwayo ngaphambi kokushicilelwa. Ipulatifomu yokulungiselela umphakathi evela ku-COS inikeza izinhlangano ezifuna ukwethula izinsizakalo zazo zangaphambi kokulungiselela isixazululo esilula, esiqinile, nesiqinile. I-COS njengamanje isekela izinsizakalo ezinomkhiqizo kumasayensi wasolwandle nawomhlaba, ezengqondo, ezenhlalo, ezobunjiniyela, ezolimo, isayensi yezenhlalo, ukucabanga nge-paleontology, ucwaningo lwezemidlalo, ucwaningo lokucabanga, umthetho, umtapo wezincwadi kanye nesayensi yolwazi, umsoco kanye nensizakalo ye-Indonesia.
Ukulungiswa okungaphezulu kwezigidi ezi-2 sekuvele kunenkomba emithonjeni eyahlukahlukene futhi kungafinyeleleka ngokukhetha isihloko esizithandayo, ukufaka amagama athile osesho, noma ukuphequlula imininingwane yokuqala esanda kufakwa. Abafaka isandla kuqala futhi bayakhuthazwa ukuthi bafake izixhumanisi zocwaningo lwabo, uma lukhona. Uma umthetho wokuqala uhlotshaniswa nephrojekthi ekhona ye-OSF, leyo projekthi nayo ingafinyeleleka kalula futhi ihlolwe. Amaphrinta we-OSF asetshenziswa YABELANA ukuhlanganisa imiphumela yosesho kusuka kwabanye abahlinzeki bengxenye efana i-arXiv, bioRXiv, I-PeerJ, I-CogPrints nabanye kufakwe kungobo yomlando yayo.
Mayelana ne-Center for Open Science
The Isikhungo se-Open Science (I-COS) isiqalo sobuchwepheshe obungenzi inzuzo esungulwe ngonyaka we-2013 ngenhloso yokukhuphula ukuvuleleka, ubuqotho, kanye nokuvela kabusha kocwaningo lwesayensi. I-COS iphishekela le mishini ngokwakha imiphakathi ezungeze izindlela zesayensi ezivulekile, ukusekela ucwaningo lwe-metascience, kanye nokuthuthukisa kanye nokugcina amathuluzi esoftware avulekile.I-OSF, Umkhiqizo we-COS we-centralism, uhlelo lokusebenza lewebhu elixhuma futhi lisekele ukuhamba komsebenzi wokucwaninga, okwenza ososayensi bakhuphule ukusebenza kahle nokusebenza kocwaningo lwabo. Abaphenyi basebenzisa i-OSF ukusebenzisana, ukubhala, ukugcina umlando, ukwaba, kanye nokurejista amaphrojekthi ocwaningo, izinto zokwakha kanye nemininingwane. Funda kabanzi ku- cos.io futhi osf.io.
Tags: Isikhungo se-Open Science